काठमाडौं । कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अधिकांश व्यवसाय प्रभावित भए पनि वाणिज्य बैंकहरूको व्यवसाय भने उत्साहजनक नै देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकले गत आवमा निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी गरेका छन् ।
बैंकहरूले वार्षिक रू. ७ खर्ब ११ अर्ब ४१ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् भने रू. ८ खर्ब १५ अर्ब ४४ करोडको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । असार मसान्तसम्ममा कुल निक्षेप संकलन रू.४२ खर्ब १ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह रू. ३७ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।
यसअवधिमा सबैभन्दा बढी कर्जा र निक्षेपको व्यवसाय गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । बैंकले ८९ अर्ब ४१ करोड थप निक्षेप संकलन गरेर कुल ३ खर्ब २५ करोड पुर्‍याएको छ । ९१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप बढाएर कर्जा प्रवाह रू. २ खर्ब ६४ करोड पुर्‍याएको छ ।
निक्षेप संकलनमा दोस्रो देखिएको ग्लोबल आईएमई र तेस्रोमा सिटिजन्स बैंकले आधा खर्बभन्दा बढी निक्षेप थप्न सफल भएका छन् । ग्लोबल बैंकले वर्षभर रू. ५६ अर्ब ७० करोडले बढाएर कुल निक्षेप २ खर्ब ८३ अर्ब ३४ करोड पु¥याएको छ । सिटिजन्सले ५० अर्ब ८० करोडले वृद्धि गरेर कुल निक्षेप १ खर्ब ४३ अर्ब पुर्‍याएको छ ।
गतवर्ष सिद्धार्थ बैंकले रू. ३९ अर्ब २६ करोडले निक्षेप बढाएर कुल १ खर्ब ८५ करोड पुर्‍याएको छ । नबिलले ३४ अर्ब ९८ करोड, प्रभुले ३३ अर्ब २१ करोड, कुमारीले ३२ अर्ब ९६ करोड, एनएमबीले ३१ अर्ब १६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रू. ३१ अर्ब १२ करोड र सिभिलले ३० अर्ब २० करोड निक्षेप बढाएको छ ।
२० अर्बदेखि ३० अर्बसम्म निक्षेप थप्नेमा प्राइम, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी, सानिमा र नेपाल बैंक रहेका छन् । रू. १० अर्बदेखि २० अर्बसम्म निक्षेप वृद्धि गर्नेमा कृषि विकास बैंक, हिमालयन, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, सनराइज, लक्ष्मी, मेगा बैंक र बैंक अफ काठमाडौं रहेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ७ अर्ब ४६ करोड निक्षेप बढाएर कुल १ खर्ब ७६ अर्ब ५ करोड पुर्‍याएको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआईको निक्षेप संकलन भने संकुचन आएको छ । उक्त बैंकको निक्षेप २ अर्ब ९२ करोड र ४ खर्ब १८ करोडले घटेको छ ।
कर्जा प्रवाहमा वृद्धिमा पनि एनआईसी एशिया अगाडि देखिएको छ । दोस्रो बढी कर्जा प्रवाह गर्नेमा नबिल बैंक रहेको छ । उसले ५२ अर्ब ६४ करोडले बढाएर कुल कर्जा रू. २ खर्ब ५ अर्ब ६५ करोड पुर्‍याएको छ । ४३ अर्ब २८ करोड थप कर्जा बढाएर तेस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह रू. १ खर्ब ९९ अर्ब ७६ करोड पुर्‍याएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले थप रू. ४२ अर्ब ५१ करोड र सिटिजन्स बैंकले रू. ४२ अर्ब ३९ करोड कर्जा वृद्धि गरेका छन् । सिभिल, सानिमा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, एनएमबी, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले ३० अर्बदेखि ४० अर्बसम्म थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, मेगा, प्राइम, कृषि विकास, कुमारी, सिभिल र सानिमा बैंकले क्रमशः २० अर्बदेखि ३० अर्बसम्म थप कर्जा प्रवाह बढाएका छन् ।
२० अर्बभन्दा कम थप कर्जा प्रवाह गर्नेमा सनराइज, लक्ष्मी, बैंक अफ काठमाडौं, एभरेष्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश र नेपाल एसबीआई बैंक रहेका छन् ।
आठ बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतमाथि
पछिल्लो समय आठ बैंकको लगानीयोग्य पूँजी कसिलो हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार आठओटा वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियो (कर्जापूँजी निक्षेप अनुपात) ८० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी मेगा बैंकको ८२ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ८१ दशमलव १२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८१ दशमलव शून्य १ र सानिमा बैंकको ८० दशमलव ६० प्रतिशत सीसीडी रहेको छ ।
सिद्धार्थ र माछापुछ्रेको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि छ । अन्य ७ बैंकको सीसीडी झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । यिनमा एनएमबी, लक्ष्मी, प्राइम, एनसीसी, सेञ्चुरी र नबिल रहेका छन् । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको कुल सीसीडी औसत ७७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । यसले थप लगानीयोग्य पूँजीमा सहजता कायम गरेको छ ।